Ubuntu Cinnamon isibonisa ukuba incasa entsha ijongeka kanjani | Ubunlog
Jonga umfanekiso we-Ubuntu Cinnamon, incasa entsha ye-Ubuntu
Njengoko abafundi bethu abaqhelekileyo besele besazi, ukuba akukho nto yenzekayo kuyakubakho incasa yesithoba ye-Ubuntu kwiinyanga ezizayo. Ayaziwa ukuba nini, ukuba ziinyanga ezili-12, ukuba ngaba zili-18 okanye zingama-24, kodwa siyazi ukuba izakubizwa ICinnamon yoBuntu kwaye iya kusebenzisa imeko yemizobo eyenziweyo yiLinux Mint. Kude kube ngoku zimbalwa iinkcukacha ezazisaziwa, kodwa ukusukela namhlanje sinokwazi ukuba iyakuba yintoni na ngoku eyaziwa ngokuba yi-Ubuntu Cinnamon Remix, okanye iprojekthi yayo, ukuba ichane ngakumbi.
Kodwa kufuneka sihlale sithandabuza. Yini i ukubala okusemthethweni yile nto Ubuntu Cinnamon ijongeka ngayo ngoku, kodwa yonke into inako kwaye iya kutshintsha xa ukukhutshwa okuzinzileyo kwenzeka. Oko sikubonayo emfanekisweni Ubuntu obunemibala, umxholo kunye neempawu ezahlukeneyo kwinto esiyaziyo Sebenzisa indawo yemizobo yeCinnamon 4.0.10. Siyabona kwakhona ukuba isebenzisa i-Linux 5.3 kernel kwaye isebenza kwiVirtualbox, isoftware yomatshini we-Oracle.
Molweni nonke, njengoko @iqosweb kukhutshwa #CinnamonDesktop verison 4.0.10 ngu @Linux_Mint kwi-Sid kunye @ubuntu U-Eoan, njengombulelo kubo, sithanda ukubhengeza hayi loo nto intsha, kodwa imixholo yethu emitsha, esiza kuthi sabelane ngayo nehlabathi! pic.twitter.com/8imOL0ak7m
-Ubuntu Cinnamon (@UbuntuCinnamon) Oktobha 5, 2019
Molweni nonke, ngexa uDebian ekhuphe #CinnamonDesktop inguqulelo 4.0.10 ngu @Linux_Minton Sid kunye @ubuntuEoan, ngelixa sibulela kuwe, sithanda ukubhengeza hayi loo nto intsha, kodwa imixholo yethu emitsha, esiza kwabelana ngayo nehlabathi!
Umahluko kunye nazo zonke ezinye iincasa ze-Ubuntu ucacile: into yokuqala ethi ithande ingqalelo yakho kukuqala kwemenyu, nangona kunokwenzeka ukuba iya kutshintsha ibe yi-Ubuntu Cinnamon oya kuyo kweli nqaku xa kusungulwa ngokusesikweni kwaye izinzile. Kwakhona ukubetha umbala weorenji kunye noyilo lwefolda, kodwa ezinye iimilo kunye nee icon ziqhelekile kuthi kuba ziyafana nezo Ubuntu Budgie.
Ukuba uyazibuza ukuba singayivavanya nini ("ezinye i-ETA?"), Umphathi weprojekthi watsho singazama into ngaphambi kokukhutshwa kuka-Eoan ErmineOko kukuthi, phambi komhla we-17 wale nyanga. Ayizukuba luhlobo olufanelekileyo ukufakela kwizixhobo zemveliso, kodwa iya kusinceda ukuba sijonge ngokwenyani okokuqala kwinto eza kuba sisongo sesithoba se-Ubuntu. Kuze kube ngoko, umfanekiso abaye babelana ngawo kufuneka usebenze ukuzola ... okanye ngokuchaseneyo. Ucinga ntoni ngomxholo osetyenziswa ngu-Ubuntu Cinnamon ngoku?
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Iidesika » Ezinye iidesika » Jonga umfanekiso we-Ubuntu Cinnamon, incasa entsha ye-Ubuntu
Hayi ... Andiyithandi kwaphela le nto. Ndiyayithanda i-Suru ++ Ubuntu. Ngapha koko, umxholo ongagqibekanga uyatshintshwa kwaye umba usonjululwe.
Okwangoku ndisebenza neLinux Mint 19.2 Cinnamon + Suru.
Umbono omkhulu ovela ku-Ubuntu Cinnamon. Vula oko ukuyivavanya.